DxOMark သည် LG V40 ThinQ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး၎င်း၏ရမှတ်ကိုတိုးစေသည် Androidsis ပါ
DxOMark ကထုတ်ဝေသည် သင့်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကို update LG က V40 ThinQ ကြောင်းခြုံငုံရမှတ်ထက်ကျော်လွန်, ပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ် (94) ၏မူလရလဒ်ထက် 1 မှတ်အားဖြင့် 93 ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်မှုသည်သူတို့၏စမ်းသပ်မှုများထဲမှတစ်ခုတွင်တွေ့ရှိသောအမှားကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြုပြင်ထားသောအလယ်တန်းရမှတ်သည်ဤအပိုင်း၏မူရင်း ၉၆ မှတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဓာတ်ပုံ၏ရမှတ်ကို ၉၈ သို့ရောက်ရှိစေသော ၈၃ မှ ၈၈ သို့တိုးလာခြင်းနှင့် Exposure နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ခြုံငုံရလဒ်အနည်းငယ်တိုးတက်မှု.
အဆုံး၌ ပြန်လည်သုံးသပ်သူများက၎င်း၏အတွင်းပိုင်းထိတွေ့မှုအတွက် V40 ThinQ ကိုချီးမွမ်းကြသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကဖုန်းကိုအိမ်ပြင်ဖော်ထုတ်ပုံကိုစိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ အရောင်များသည်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာစေသောနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုသူတို့ပြောကြသည်။ အသေးစိတ်ကိုပြင်ပတွင်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ terminal ကိုသုံးဆနောက်ဘက်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည် ၎င်းတွင်စံ 12 MP Optical Sensor (f / 1.5, 1,4 μmနှင့် 78 ဒီဂရီအကျယ်) နှင့် 16 MP အကျယ်ထောင့် (f / 1.9, 1,0 μmနှင့် 107 ဒီဂရီ) နှင့် telephoto lens 12 MP (f / 2.4) တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ , 1,0 μmနှင့် 45 ဒီဂရီ) ။ ဒီကင်မရာသုံးလုံးဟာတောင်ကိုရီးယားမိုဘိုင်းအတွက်ရည်ညွှန်းပလက်ဖောင်းပေးတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။
ကနေကောက်နုတ်ချက်တစ်ခုကိုကိုးကား ဤဆောင်ပါး, ယခုအချိန်တွင် DxOMark စာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံး devices ငါးခုမှာဖြစ်ကြ၏ Huawei က P30 Pro ကို (112), အ Samsung ရဲ့ Galaxy S10 5G (112), အ 20 Pro ကိုမိတ် (109), အ P20 Pro ကို (109) နှင့် က Galaxy S10 Plus အား (109) ။ The Xiaomi က Mi9သူက 107 မှတ်နှင့်အတူဆsix္ဌမနေရာမှတွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကပြတယ် သင်ကင်မရာများတွင်အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေနေပါက LG V40 ThinQ သည်အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါဒါပေမယ့်စဉ်းစားရန်အကောင်းတစ် ဦး ။
အပြည့်အဝအကျဉ်းချုပ်နှင့်စမ်းသပ်မှုနမူနာအဘို့, အောက်ပါအရင်းအမြစ် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် DxO ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို ဦး ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » DxOMark သည် LG V40 ThinQ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုအဆင့်မြှင့်ပြီး၎င်း၏ရမှတ်ကိုတိုးမြှင့်သည်
အံ့မခန်း !! မည်သည့် Android တွင်မဆို Samsung Galaxy S10 ဂီတလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ